Computer Shil Lugood Recovery
> Resource > Lugood > Sidee soo celinta Lugood Library ka Computer burburtay
"My computer burburtay iyo waxaan laga badiyay Lugood Library aan. Suuragal u tahay in aad hesho Lugood Library tan iyo markii aan lahaa synced Lugood aan la iPhone 5, iPad 3, iyo iPod dib. Fadlan siiyaan talo qaar ka mid ah." - Juudi
Shil Computer ka dhigi kartaa Library Lugood ah laga badiyay. Cidna ma rabto shil kombiyuutarka ah, si kastaba ha ahaatee, waxa dhici kara wakhti kasta. Ha welwelina, ka dib markii computer ku burburtay, waxaad soo kaban karto, Lugood Library ka computer ku burburtay haddii aad rabto user ee kor ku xusan ayaa synced aad Lugood Library la iPhone, iPad, iPod ama. Maqaalkani waxa uu kuu sheegayaa sida inuu ka soo kabsado Library Lugood ka computer shil la iPhone, iPod, ama iPad taas oo ka kooban in aad heeso.
Waa hagaag, ka hor inta aynaan ka heli hoos shaqada, waxa ugu horeeya ee aan u baahan tahay inaad samayso waa inaad kala soo baxdo qalab iPhone xirfadeed. Halkan, waa in aadan isticmaalin Lugood ah, sababtoo ah ma caawin karaan in aad heeso ka qalab Apple ay ku Lugood Library hesho. Halkii, waxayna u maleeyeen aad kala soo bixi TunesGo, qalab xirfad Apple inuu ka soo kabsado Library Lugood ka dib markii computer burburtay. Download TunesGo saxda on your computer. Kala TunesGo Windows iyo TunesGo (Mac) ayaa la heli karaa si ay u soo bixi.
Tallaabada 1. Run TunesGo
Burcad TunesGo iyo xiriiriyaan qalab Apple oo ku jira heeso aad u baahan tahay la your computer. Ka dib markii ay si guul ah ku xira, waxaad ka arki kartaa qalab aad waxaa la soo bandhigay uu furmo suuqa hoose. Labada qeybood oo TunesGo Windows iyo Mac taageeraan iPhone, iPad, iPod iyo taaban socda ee macruufka 5/7/6, classic iPod, shaandheeyn lagu iPod, iyo iPod nano. The version Mac ma taageeri iPod xiriiri 3. Sida nano iPod / classic / shaandheeyn, version Mac soo celin karaa oo keliya Lugood music iyo playlists.
Tallaabada 2. Soo Celinta Library Lugood ka dib markii shil computer
Laga bilaabo bidix ee suuqa ugu weyn, waxaad ka arki kartaa "Media". Waxaa Riix oo aad ka arki kartaa nooc kasta oo files in this category. By default, tab ugu horeysay ee waa Music. Daaqadda Music, waxaad ka arki kartaa heesaha oo dhan ku saabsan qalabka Apple. Si fudud riix "Smart dhoofinta in Lugood", ka dibna heesaha oo dhan ka qalab tufaax aad wareejiyo Lugood Library on your computer. Ama waxaad dooran kartaa heeso fudud loo baahan yahay oo guji "Dhoofinta in Lugood Library" ka "Dhoofinta" liiska hoos-hoos.
Waxay qaadan oo keliya daqiiqado yar in la soo celiyo Library Lugood ka computer shil la Wondershare TunesGo. The qodobkan muhiimka ah waa in aad si joogto ah waa in dib aad Lugood Maktabadda qalab tufaax aad.
Isku day TunesGo Wondershare hadda!